Ogeessi fayyaa Dakota sababa Covid-19 namni tokko dabalataan du’uu gabaase, waliigaltti namni due 39 | KWIT
Kutaan Iowa torbaan tokko keessati waan jia lama keessati hin argin namni 3,600 torban tarte keessa dabalataan qabamu gabaasan.
Bakka bu’aan Sioux City dhooysaa dhaan filannoo adeemsise waaye SkyWest airlines akka ayiriidhan Denver irraa airprtii Sioux gateway keessati akka bu’uuf. Kunis xayyaari October 1st irraa karaa kana deemu jalqaba.
Ponca Tribes kan Nebraska sporti yookin maqaa isaani jijjiiruf hubachiisa baheen walqabattee labsii baase jira.
Missensi NFL kan Washington akka har’a gabaasseti har’arraa jalaqabe maqaa miseensa isaani qara itti waamamani “redskin” waamamu dhiisani.
Cleveland Indians guyyaa jimaata gurraapi jaraatif jecha jijjiira maqaa isaanitif mariyachu jira.
Kutaa Iowa keessati ulfa baasun waggaa tarte caala baaye olguddatee jira.
Rakkini guddaaan ulfaa garaa baasu olkae kun sababa warri state murtii gargaarsa mootumma warri fadaraala dhaabu irra kankae akka tae shakkama.
Waggaa dheeraf lakkoofsa ulfa garaa baasu erga laale booda, galmeen state kan waggaa taree kan mullisuu gara ulfa 3,500 garaa bahe. Kunis 25% ol waan waggaa sanduraa irraa ol kae.
Olguddinnii waggaa taree kan mullisu kun erga ulfa garaa baasun Iowa 56% bara 2008-2018 gad bu’ee booda.